Soo-celinta Australiyaanka: Degdeg ah oo Madadaalo leh - Taranka
Bal qiyaas labada superhero aad jeceshahay. Hadda ka fikir inay isku daraan awoodooda si ay u abuuraan kama dambaysta ah superhero.
Taasi waa wax badan oo ku dhacay wixii Ka-noqoshada Australiya , sidoo kale loo yaqaan magacyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin Dahabka Aussie , Dhalashada Dahabka ah ee Australiya , Ka-noqoshada Adhijirka Australiyaanka ah , iyo Adhijirka Dahabka ah ee Australiyaanka ah .
La kulan dhakada dahabi ah ee dahabiga ah & Australian Shepherd mix
Noocan isweydaarsiga dhogorta badani waa caqli firfircoon oo kugu hayn doona suulashaada dhammaan siyaabaha ugu wanaagsan. Sii wad akhriska si aad wax badan uga ogaato!
Asalka Australian Retriever
Muxuu Dahabka Aussie u eg yahay?
Maxaa laga filan karaa dabeecadda Aussie Retriever?
Lahaanshaha adhijir Australian Dahab ah
Ma leeyihiin adhijirro dahabi ah oo Australian ah arrimo caafimaad?
Raadinta Ey Australian Adhi ah Retriever eey yar oo iib ah
Miyuu Australiyaanka qaaliga ah ee 'Retriever' yahay xayawaankaaga ugu fiican?
Waxaa la rumeysan yahay in soosaaraha Australiya uu mas'uul ka yahay abuurista doggo-gaan. Marka loo eego aragtida, breeder waxay ka gudubtay Shepherd-ka madow ee Australiya iyada oo ay la jiraan Waxyaabihii Dahabiga ahaa ee laga helay 2007 iyo 2008.
Tan iyo markaas, iskutallaabta ayaa loo aqoonsaday ururradan: Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka (ACHC), Naadiga Naqshadeeyaha eeyaha Naadiga (DDKC), Diiwaanka Eyga ee Mareykanka (DRA), iyo Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah (IDCR).
Hadda, aan u gudubno eeyaha bilaabay noocyadan quruxda badan ee isku dhafan.
Adhijirrada Australiyaanka ah: Awoodda tamarta
La kulan Adhijirka reer Australia
In kasta oo aaggu ku jiro magacooda, casriga ah Adhijirka Australia kama imaanin Land Down Under.
Awoowayaashood dhowaan waxay asal ahaan ka soo jeedaan waddanka Basque ee Yurub, laakiin taranka ayaa la sifeeyay oo caan ka noqday Mareykanka.
Loo daaqay xoolaha Aussies yihiin eeyaha shaqeeya ilaa xudunta .
Iyaga oo loo yaqaan anshaxa shaqada iyo sirdoonka , Adhijirka Ustaraaliya waa shoo-in dhammaan noocyada shaqooyinka bakhaarka, laga bilaabo goobidda iyo samatabbixinta ilaa daaweynta.
Dahabiyeyaasha Dahabka ah, mid ka mid ah kuwa ugu caansan Mareykanka
La kulan Dareeraha Dahabka ah
Loogu talagalay in dib looga soo qaado shimbiraha biyaha, Soo Celinta Dahabiga ah (ama Goldens soo gaabin) waa nooc kale oo heegan ah.
Waxaan u mahadcelin karnaa Dudley Marjoribanks oo reer Scotland ah oo na siiyay abaal-marinta Dahabka ah bartamihii 1800-naadkii.
Meel qashin ah oo wax laga soo helay madow, mid ka mid ah eeyaha jaalaha ah ayaa istaagay. Marjoribanks wuxuu ka tallaabay cunugga isagoo hadda bakhtiyey Tweed Water Spaniel . Caruurtooda waxay u baneeyeen maanta Retriever Golden.
Sanadihii la soo dhaafay, Soo Celinta Dahabiga ah ayaa noqotay xayawaanka guryaha jecel . Waxay si isdaba joog ah uga mid noqdaan sare 5 ee 'Noocyada ugu Caansan' ee AKC liiska .
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee ku saabsan iskutallaabta loo yaqaan 'Shepherd-Golden Retriever cross' ee Australia ayaa ah in laba eey aysan isku ekaan. Waxaad ka iibsan kartaa eeyo yar yar oo isla qashinka ah, mid walbana wuxuu ku dambayn karaa muuqaallo u gaar ah.
Dib u soo celinta Aussie waxay u muuqataa inay leeyihiin faneedyo, looxyo si wanaagsan isu le'eg naftooda u dhiibta waxqabad iyo jimicsi.
Indho diirran oo hadh noqon kara buluug ama bunni , Isku darkaaga Australia ee 'Retriever' ayaa hubaal ah inuu noqon doono wax lala yaabo. Dhegahoodu waxay u daadanayaan dhinac kasta oo ka mid ah madaxooda ballaadhan, iyo wareegooda, sanka madow ayaa ah maahmaahda dusha sare ku taal.
The Aussie Retrievers jaakad laba-biyo-celisa ah waxay noqon kartaa isku-darka caddaan, madow, bunni, gogol, timo cad, ama dahab midabada. Waxay sidoo kale yeelan karaan astaamaha meer guduudan ama buluug ah ee Adhijirka Australia.
Dhogorkoodu wuxuu noqon karaa mid dhexdhexaad ah ama dheer, wax yar oo ruxruxa ama toosan, laakiin badiyaa wuxuu leeyahay qaab aan caadi ahayn.
Adhijirkaaga Australiyaanka ah ee Dahabiga ah waxay u badan tahay inuu ku dambeeyo dabo dheer oo qalafsan ee Dahabka Dahabka ah. Tani had iyo jeer maahan kiiska, in kastoo.
Qaar Aussies ah oo saafi ah ayaa ku dhasha dabo bobbed ah. Waxay kuxirantahay cunugaaga waalidkiis, waxay lahaan karaan dabada oo buuxda, ama waxay noqonkartaa mid aad uyar oo ay umuuqato inaysan heysan haba yaraatee.
Immisa ayey le'eg tahay qaangaarka Australiya ee buuxa?
Iyada oo ku saleysan jaantusyada koritaanka waalidkood, Aussie Golden-gaagu waa inuu gaaraa cabirkooda oo buuxa inta udhaxeysa Da'da 12 ilaa 16 bilood . Dadka waaweyni guud ahaan way is miisaan doonaan 30 illaa 60 rodol (14 ilaa 27 kg) oo istaag 19 ilaa 23 inji (48 ilaa 58 cm) dheer.
Ma door bidaa wax ku dhow cabbirka dhabta? Mini Golden Aussie waa suurtagal haddii mid ama labada waalidba ka kooban yihiin Shepherd yar oo Mareykan ah iyo Gunaanad Dahab ah .
In kasta oo midkoodna kala duwanaanshaha 'Retriever' Australiya uusan si gaar ah u weyneyn, noocani waa looguma talagalin ku noolaanshaha guryaha . Iyaga oo leh ruuxi go-getter, bakooradani waxay ku kobcaan guryaha leh daarad waaweyn oo deyr leh.
Fido-kani waa a xayawaanka la yaab leh ee qoysaska firfircoon . Waxay la wadaagaan carruurta da 'kasta oo ay yihiin, waxayna la yeeshaan xiriiro dhow qof kasta oo ku jira xirmadooda.
Qaado ilbiriqsi si aad u daawato fiidiyowgan ee puppy mele qalalan oo ku raaxeysanaya xoogaa barxad ah oo uu la ciyaaro bini-aadamkooda:
Xaqiiqdii, Australian Retrievers waxay jecel yihiin qoysaskooda si aad ah oo ay doorbidi lahaayeen inay la joogaan 24/7.
Way u dulqaadan karaan inay kali ahaadaan muddo gaaban, laakiin waxay u baahan yihiin isdhexgal joogto ah iyo kicin . Kuwaas la'aanteed, Adhijirka Dahabiga ah ee Ustaraaliya waxay u jeesan karaan dabeecado wax dumiya si ay ula qabsadaan degganaansho la'aan iyo kala-goysnaan la'aan. Natiijo ahaan, isku-dhafkan maahan inuu ku noolaado ama ku seexdo banaanka .
Si aad u macaanto dheriga, Aussies Golden waa doggos saaxiibtinimo , xitaa shisheeyaha. Haddii aad ku raaxeysato martigelinta iyo madadaalada, uma baahnid inaad ka walwasho isku darkaaga 'Shepherd-Golden Retriever mix' oo isku dayaya inaad ka nixiso martidaada.
Saaxiibtinimo sida ay noqon karaan, Aussie Shepherd Retrievers waxay yeelan karaan a xadka dhulka . Waxay heli karaan difaac qofka ay jecel yihiin, ama waxay ku duleeysan karaan alaabada guriga lagu jecel yahay.
Isha ku hay carruurta iyo xayawaanka kaleba haddii alaabada carruurtu ku ciyaaraan ay ku jiraan waqtiga ciyaarta. Aussie-kaaga 'Golden Aussie' ayaa laga yaabaa inuu go'aansado inay ka daaleen wax wadaagga, waxaadna dooneysaa inaad ka ag dhowaato si aad u hubiso in qof walba si fiican u ciyaarayo.
Soo Celinta Aussie waxay leeyihiin tayo ilaalin , sidoo kale. In kasta oo aysan wax badan ciyi jirin guud ahaan, haddana waxay in badan diyaar u yihiin inay kaa difaacaan hanjabaadaha iman kara ama haddii ay jiraan wax xumaan ah.
Dhinacooda Aussie ayaa iyaga sameeya xoolo dhaqatada , sidaa darteed socod baradka iyo bisaduhu iska jir! Iyada oo kuxiran sida ay u xoog badan yihiin hiddo-wadayaashaas raacaya, waxaad heli kartaa xubnahaaga ugu yar ee xirmada ah oo marmar is-dhex-marin kara.
Ha ka welwelin maxaa yeelay dareennadaas dhaqashada ahi si tartiib tartiib ah ayey u jaban doonaan markii eygaagu bislaado. Waxa kale oo aad qaadi kartaa talaabooyin aad ku bari karto ilmahaaga iyo carruurtaada waxa la sameeyo haddii dabeecadani ay koraan.
Hal shay oo aan waligiis duugmi doonin ayaa ah Aussie Golden's-kaaga ruux rambunctious . Iyaga jacayl inuu ciyaaro, soo kaxeeyo, oo uu nolol la noolaado. Barashadaadu wey sii weynaan kartaa, laakiin way kori doonaan waligood kama weynaanin eeyo u ekaantooda u eg .
La kulan Loki, Iskuduwaha Dahabka-Australian Shepherd mix - Isha sawirka
Nasiib wanaagse, tababbarka noocani waa socod lug ah oo lagu dhex leeyahay eeyga.
Aussies iyo Goldens waa labada nooc ee ugu caqliga badan dunida canine ka, sidaa darteed Retriever-kaaga Australiyaanka ah waxaa si aad ah loogu balan qaadayaa inuu yahay si dhakhso leh wax u barta . Waxay jecel yihiin tababarka, tanina waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka takhalusto dabeecadaha dhibaatada bilowgaba.
Isla markii uu cunuggaagu guriga kula yimaado , bilow dejinta rajooyinka. Waxaad dooneysaa inaad ka hortagto dhaqashada aan habooneyn ama astaamaha dhuleed intaysan xitaa bilaaban.
Mar haddii iskudhafkaaga Australiyaanka ah ee 'Shepherd-Golden Retriever' si buuxda loo tallaalay, bilaw inaad u qaadatid fasallada adeecida iyo taariikhda cayaaraha eeyaha.
Isku darka bulshada iyo tababarka habdhaqanka noloshooda oo dhan waxay bari doontaa sida loo sameeyo si habboon ula falgal eeyaha kale iyo dadka kale . Waxay sidoo kale ka celineysaa inay noqdaan kuwo aad u liita kooda qofka ugu jecel. Sidoo kale, way ku caawin doontaa adkee meeshaada sidii hogaamiye baako aan cabsi lahayn .
Weligood da 'ahaan maayaan da' cusub. Dheeraad ah, kicinta maskaxda ee socota waa mid muhiim ah farxad this. U isticmaal tababarka sidii waqti aad ugu xirmi karto eeygaaga oo aad u kobciso baahidiisa.
Nasiib wanaag, daryeelida iskudhafka Australiyaanka ah ee Shepherd-Golden Retriever waa mid toosan, sidoo kale. Sii wad akhriska si aad u aragto waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad saxaradaada ugu ilaaliso farxad iyo caafimaad!
Arooska: Miyuu Australiyaal Soo Celiyayaashu daadiyaan?
Haa. Iyo sida daadiyayaal dhexdhexaad ah ama culus , cadayashada laba jeer usbuucii badanaa waa ku filan tahay. Marwalba waad cadaadin kartaa si ka badan si loo yareeyo daadinta. Laakiin waa inaadan waligaa xiirin eeygan.
Xusuusnow jaakad laba jibbaar ah oo aan horay u soo sheegnay, sax? Lakabkan labaad ee timaha wuxuu ka ilaaliyaa eeygaaga Aussie ee cunsuriyada kana caawiya inay nidaamiso heerkulka jirkeeda.
Xiirashada waxay yareysaa awoodda jaakadu u leedahay inay shaqadeeda qabato waxayna u horseedi kartaa raaxo la’aan iyo waxyeelo eygaaga.
Ey adhijir ah oo reer Australian ah oo caafimaad qaba - Isha sawirka
Ku haynta jaakadaas laba-labka ah xaalada sare waxay hubin doontaa in Dahabigaaga Aussie uu sameyn doono dhif u baahan qubeys .
Waan ognahay inay u egtahay mid iska soo horjeedda, laakiin badbaadi musqulaha buuxa marka loo baahdo. Taasi waa habka ugu fiican ee lagu ilaalin karo saliidaha dabiiciga ah ee dhogorta.
Haddii aad horeyba u liidatay fikirka timaha eeyga wasakhaysan, ha murugoon. Markuu cunugaagu banaanka keeno, isticmaal a caday ama tirtiro qoyan si loo nadiifiyo. Haddii ay si aan caadi ahayn u nijaasoobeen iyo oggolaanshaha cimilada, ku tuur banaanka. Kaliya ha isticmaalin shaambo!
Inta kale Jadwalka quruxda badan ee Australian Golden Retriever waa waqti yar . Hal mar maalintii ama wax la mid ah, waxaad u baahan doontaa inaad iska hubiso kuwa xiisaha badan ee jilicsan dhegaha calaamadaha cayayaanka ama qashinka.
Ha iloobin inaad cadaydo maalin kasta iyo jar ciddiyaheeda toddobaad kasta.
Waa maxay cuntada eeyga ugu fiican ee loo yaqaan 'Aussie Retriever'?
Nafaqo ku filan way ku kala duwan tahay eyga. Meelaha firfircoon guud ahaan waxay ku fiican yihiin cuntada borotiin badan , iyo tan loo yaqaan 'crossbreed' waa mid aan ka reebanayn. Xullo a tayo sare leh kibble qalalan loo sameeyay fiddo dhexdhexaad ah ama weyn oo fir-fircoon. Sidoo kale waa inay ku habboon tahay da'da xayawaankaaga, miisaanka, iyo shuruudaha caafimaad.
Qiyaastii 2 ilaa 3 koob oo cunto ah maalin kasta saxaradaadu way sii shidi doontaa, ka dibna waxay u kala baxdaa quraac iyo casho. Ka fogow naas-nuujinta iyo quudinta bilaashka ah si loo yareeyo khatarta buurbuur iyo miisaanka oo aan caafimaad qabin.
Jimicsiga jimicsiga, tani waxay kaliya u noqon kartaa eeyga adiga. Shepherds Golden Aussie waa firfircoonaan badan iyo baahi ugu yaraan 60 daqiiqo oo jimicsi ah maalintii .
Waxaan u baahanahay inaan si cad u ogaano in xaddiga jimicsigaasi yahay aan gorgortan geli karin .
Ma hubo inaad diyaar u tahay saacad aan kala go 'lahayn oo wadnaha ah maalin kasta? Fikrad khaldan oo guud ayaa ah in hawshani u baahan tahay inay mar wada dhacdo. Waa fiican in la kala qaado jimicsigaaga doggo ee maalintii oo dhan. Nagu kalsoonow, kala-goysyada iyo muruqyada Fido ayaa kaaga mahad celin doona.
Khadadkaas oo dhan, nidaamka jimicsiga ee ardaygaagu waa inuu ku lug yeeshaa wax ka badan socod ama ku dhex maro baarkinka.
Dhaqdhaqaaqa jidh ahaaneed waa mid cabsi badan, laakiin Soo Celiyayaasha Australiya waxay ubaxaan marka baahidooda maskaxeed la daboolo, sidoo kale. Si aad u ilaaliso maskaxdooda, ku dar socod dherer dhexdhexaad ah ciyaar iyo tababarro.
Xor ayaad u tahay inaad waxyaabo uunsiso . Waxay yihiin aan u nuglayn cimilada kulul ama qabow , sidoo kale. Maxay taasi adiga kuu tahay? Fursado badan!
Waxay jecel yihiin inay si xor ah ugu ordaan meelaha ballaaran, iyagoo ceyrsanaya mowjadaha xeebta, xitaa socodka! Ma jiro buur aad u dheer, haddii aad weydiisato hareerahan.
Kulamada jimicsigu had iyo jeer maahan inay ku lug yeeshaan safarada dibedda, in kastoo. Ku dhaji dhinacaaga abaalmarinta 'Golden Aussie Shepherd', oo ku daalo iyaga oo leh ciyaar caadi ah oo soo qaad ah. Kaliya iska hubi inaad kujirto a aag gebi ahaanba oodan ka hor intaadan u oggolaan inay ciyaaraan.
Mar haddii Australiya Retriever qabsato ur, way ku xidhan yihiin oo waxay go'aansadeen inay raacaan. Ku celceli xirfadahooda soo celinta si joogto ah, oo fiiri helitaanka a hogaan dheer si ay lugaha u kala fidiyaan iyagoon qaadan safar duur oo iyaga u gaar ah.
Sida noocyada oo dhan, Aussie Golden Retrievers waxay u nugul yihiin xaaladaha caafimaad qaarkood.
Waa qeyb ka mid ah lahaanshaha eeyga oo midkeenna uusan jeclayn inuu ka fekero. Laakiin inta badan ee aad ka ogtahay waxyaabaha eygaaga halista ugu jira, way sahlanaan doontaa in la ogaado dhibaatooyinka caafimaad ee iman kara.
Iyada oo leh Aussies Golden, waxaad dooneysaa inaad iska eegto calaamadaha dhibaatooyinka indhaha , sida indho-beel iyo colobomas . Waxaa sidoo kale jira qanjirka 'thyroid' oo aan firfircooneyn, xasaasiyad, burooyin, iyo sinta dysplasia .
Australian Retriever-kaaga ayaa waliba dhaxli kara arrimo caafimaad oo gaar ah. Dahabiyeyaasha Dahabka ah ayaa nasiib darro caan ku ah inuu ku dhaco kansarka, halka Xasaasiyadda Multidrug wuxuu ku badan yahay Adhijirka Australia.
Nasiib wanaagse, xitaa iyadoo ay jiraan khataro caafimaad qaarkood, Aussie Goldens waxay noolaataa waqti dheer. Booqashooyinka dhakhaatiirta xoolaha ee joogtada ah iyo daryeelka saxda ah, Soo-celiyeyaasha Australiya waxay ku raaxaystaan ​​cimri 12 ilaa 15 sano .
Australian Shepherd Retriever eey - Isha sawirka
Soo-celinta Australiya ayaa ah mid la awoodi karo marka la barbar dhigo noocyada kale ee naqshadeeyayaasha. Qiimaha eeyahaani waxay u dhexeeyaan $ 300 ilaa $ 900 .
Sababtoo ah iskudhafkan ayaa wali ah mid cusub oo naadir ah, helitaanka breed ama aqal si gaar ah u dhasha iskudhafka Australiyaanka Shepherd-Golden Retriever way adkaan kartaa.
Taas macnaheedu maahan inaysan macquul ahayn, in kastoo.
Soosaarayaasha & aqallada 'Golden Golden Retriever breed & kennels'
Haddii aad horeyba u sameysay cilmi-baaristaada oo aad ku kalsoon tahay inaad wax ka qaban kartid isweydaarsigan, waxaan ka helnay degello internetyo leh Golden Aussies iib ah ama korsasho.
Waxay sidoo kale yeelan karaan iskutallaabyo kale oo Australian Shepherd ah iyo iskudhaf Golden Retriever oo xiiso kuu leh. Waa kuwan dhowr meelood si aad u hubiso:
Samatabbixinta Adhijirka Galbeedka Australia (Sheridan, WY)
Samatabbixinta Soo-Celinta Dahabka ah ee Dooxada Delaware (Reinholds, PA)
Samatabbixinta Neefta Weyn ee Dahabka ah (Raleigh, NC)
Waxaan sidoo kale helnay a Bogga Facebook oo loogu talagalay Australiyaanka Retrievers, waxaanan u maleyneynaa inay mudan tahay in la fiiriyo.
La kulan Daisy, Aussie Golden isku dhafka eey - Isha sawirka
Haddii aad ku garaacday ama aadan ku dhicin, waxaad u baahan tahay inaad qirato in Aussie Goldens ay leedahay wax badan oo ay bixiso.
Iyaga jecel qoysaskooda , waxay jecel yihiin inay ciyaaraan, waxayna jecel yihiin inay wax bartaan. Waxay sidoo kale si fiican ugu raaxaystaan ​​jimicsiga iyo u baahan milkiile firfircoon leh adkeysi badan.
Miyaad u malaynaysaa inaad la socon karto Australian Retriever? Noo soo sheeg faallooyinka!
Dorkie ma adiga ey wanaagsan baa kuu dhasha?
intee le'eg ayay qaadanaysaa pitbull sanka cas
meeqa waa qiimihii pitbull buluuga ah
sifada u go'aami nooca eyga
dachshund jack russell chihuahua isku darka
intee ayuu weynaan doonaa ilmahayga?